Atrikasa CSR manidina Tiger 2020 - Shanghai
Fotoana fandefasana: 01-11-2021
Ny seminera Flying Tiger CSR tamin'ny taona 2020 dia notontosaina tany Shanghai tamin'ny 27 Oktobra. AMIN'NY 20 mpamatsy kalitao 20 ambony indrindra dia manana voninahitra lehibe izahay manatrika ity seminera ity. Nifantoka tamin'ny lohahevitra roa momba ny fanarahan-dàlana sy ny fanaraha-maso kalitao ny seminera. Amin'ny alalàn'ity fampiofanana ity dia manana understan tsaratsara kokoa ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: 12-23-2020
Amin'ny faha-17 Oktobra, ireo mpiara-miasa amin'ny sampana orinasa voalohany dia vonona ny handeha ho any amin'ny farihy Qiandao tsara tarehy, ary efa hanomboka ny ora mahafaly! Ny toetr'andro tamin'io andro io dia tena namelombelona, ​​ary ny toerana manodidina teny tsara tarehy ihany koa. Ny zava-maniry maitso emeraoda sy trano isan-karazany ...Hamaky bebe kokoa »
Fandrosoana tsy misy farany- ny fivoriana isan-taona an'ny Mia Creative 2018
Fotoana fandefasana: 12-22-2020
Mandeha ny fotoana, ary indray mipy maso fotsiny dia lasa ny 2018 be atao, ary tonga ilay fanantenana vaovao 2019. Tamin'ny 28 Janoary, F&S 2019 Fihaonana isan-taona notontosaina tao amin'ny Sanding New Century Grand Hotel. Tamin'ny fivoriana fanao isan-taona dia nivory ny mpitantana ny orinasa sy ny mpiara-miasa rehetra hamintina ny ...Hamaky bebe kokoa »
Miaraha mamorona ny fihaonambe isan-taona 2020
Fotoana fandefasana: 08-10-2020
Miaraha mamorona ny ho avy Conference Fihaonambe fanao isan-taona 2020 Tsy fantatrao fa faran'ny taona indray izao. Ny faha-20 Janoary dia natao tao Shangri-La Hotel ny fivoriana fanao isan-taona an'ny Mia Creative. Niara-nivory izahay mba haka sary an-tsaina ny ho avy. Tamin'ny fiandohan'ny fivoriana, Ou ...Hamaky bebe kokoa »